यी हुन् ‘छक्का पञ्जा २’ का नयाँ टिम मेम्वर « Ramailo छ
यी हुन् ‘छक्का पञ्जा २’ का नयाँ टिम मेम्वर
प्रकाशित मिति : Sep 21, 2017
समय : 9:33 am
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘छक्का पञ्जा २ ‘प्रदर्शनमा आउँन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ । यो मल्टीस्टारर फिल्म असोज ११ गते, फूलपातीदेखि देशका सम्पूर्ण हलहरुबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्म प्रदर्शनको मुखमा हामी दिपाश्री निरौला निर्देशित फिल्म ‘छक्का पञ्जा २’ का नयाँ सदस्यहरुबारे चर्चा गरौं :
विकास आचार्य र सामिप्यराज तिमल्सिना : लेखक, निर्माता तथा विकास आचार्यले छक्का पञ्जा २ मा लेखन र लगानीमा सहकार्य गरेका छन् । विकास सँगै स्क्रिप्ट राईटर सामिप्यराज तिमल्सिना पनि ‘छक्का पञ्जा’मा स्क्रिप्ट राईटरको रुपमा नयाँ सदस्य हुन् । विकासले निरञ्जनाको लागि रोजेका कथा दिपकलाई मन परेपछि उनीहरु ‘छक्का पञ्जा २’ बनाउन राजी भएका थिए । दिपक र दिपाश्रीसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
दिर्घ गुरुंग : ‘छक्का पञ्जा २ लाई दिर्घ गुरुंगले खिचेका छन् । टिममा उनी नयाँ सदस्य हुन् । यसअघि दिपक र दीपाश्रीले निर्माण गरेका दुई वटा फिल्महरु छ एकान छ र छक्का पञ्जा सिनेम्याटोग्राफर पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका थिए । सिनेम्याटोग्राफर प्रधानकै विशेष आग्रहमा दिपाश्रीले ब्लकबस्टर फिल्म छक्का पञ्जा निर्देशन गरेकी थिइन् । तर यसको सिक्वेलमा भने कार्य व्यस्तताका कारण पुरुषोत्तमले खिच्न सकेनन् । उनले ‘छक्का पञ्जा २’ को ‘झ्याम्म झ्याम्म’ गीत भने खिचेका छन् । संगीतकारको रुपमा किरण कंडेल, अल्मोडा राना उप्रेती र प्रिन्स नेपाली थप भएका छन् । दिपाश्री, प्रियंका, बर्षा र स्वस्तिमासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
पात्र सिक्वेल भनिएको ‘छक्का पञ्जा’ को स्क्रिनमा नायिका स्वस्तिमा खड्का, नायक आयुष्मान देशराज जोशी, नव नायक स्वरुप पुरुष ढकाल, गौरव पहारी नयाँ अनुहार हुन् । यी पात्रको आगमनले ‘छक्का पञ्जा’ को सिक्वेलमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् ? त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । दिपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, शिवहरी पौडेल, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बर्षा राउत लगायत पात्रहरु यथावत् छन् भने नायिका नम्रता सापकोटा सिक्वेलमा दोहोरिएकी छैनन् । बर्षा र स्वस्तिमाको ब्यागमा के छ ? भिडियो हेर्नुस् :